के शोभित बस्नेतले राजेश हमाललाई नतमस्तक हुँदै ढोगेका थिए ? (हेर्नुस भिडियोमा):: Mero Desh
के शोभित बस्नेतले राजेश हमाललाई नतमस्तक हुँदै ढोगेका थिए ? (हेर्नुस भिडियोमा)
Published on: २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०६:३४
“काठमाडौं,केही समययता निर्देशक शोभित बस्नेत चर्चा र विवादमा छाएका छन् । आफू निर्देशित फिल्म ‘डाँडाको बरपीपल’ को ‘काट्दि म्ला जुँगा जम्मै’ गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘भुवन केसी मात्र नेपाली फिल्म क्षेत्रको असली महानायक’ भनेपछि उनी वि,वादमा तानिए ।
“फिल्म क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेका ले यो उपा धिको हकदार राजेश हमाल हुन न,स क्ने उनको स्पष्ट तर्क थियो । उनको यो अभिव्य क्ति ले सामाजिक सञ्जाल यति तात्यो कि उनी निर्दे शित फिल्मलाई ब,हिस्कार गर्नेसम्मका कुरा दर्श कले उठाए ।
“लाखौंको लगानीमा बनेको फिल्म दर्शकले नहेर्ने भनेपछि शोभित नराम्रोसँग तर्सिए । यसपछि उनले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्विरलाई प्रमुख अतिथी बनाएर आफ्नो बुझाइ गलत रहेको बताउँदै दर्शकसँग मा,फी नै मा,ग्न भ्याए ।
“उनले अबदेखि राजेश ह,माललाई ‘महानायक’ र भुवन केसीलाई ‘सुपरस्टार’ भन्ने वाचा नै गरेका छन् । गत हप्ता पत्रकार प्रकाश सुवेदीले ‘महाना यक’ विवाद टुंग्याउन निर्देशक बस्नेतलाई राजेश हमालसँग भेट गर्ने माहोल जुराइदिए ।
“२ घन्टा ला,मो भेटमा हमालले शो,भितलाई ‘सम्झाइ बुझाइ’ गरेको भिडियो क्लिप यतिबेला सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा व्यापक भाइरल भएको छ ।
“योसँगै शोभितको टाउकोमा राजेश हमालले हात राखेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जाल मा कम्ता भाइरल छैन । राजेश हमालसँँग माफी माग्दै शोभितले टाउको झुकाएरै ढोगे को भन्दै उक्त भिडियोलाई धेरैले टिकटकमा पोस्ट गरेका छन् ।
“तर, सोमवार शोभितले फेसबुकमा आवाज सहितको सोही भिडियो पोस्ट गर्दै राजेश हमा लले आफ्नो टाउकोमा हात राख्नुको वास्तवि कता खोलेका छन् ।
“भिडियोमा हमालले शोभितलाई सोधेका छन्, ‘हेयर स्टाइल तपाईंले प्रत्येक दिन चेन्ज गर्नु हुन्छ ?’ जवाफमा शोभित हाँस्दै भन्छन्, ‘प्रत्येक दिनभन्दा पनि चेन्ज भइरहेको छ ।’ हमाल फेरि सोध्छन्, ‘कपालले साथ दिइरहेको छ ?’
“शोभित फेरि जवाफ फर्काउँछन्, ‘हजुर, साथ दिइरहेको छ ।’ राजेश हमा,ल फेरि सोध्छन्, ‘कपाल आफ्नै हो नी ?’ शोभितले ‘आफ्नै हो’ भनेर जवाफ फर्काउँछन् ।
“शोभितले आफ्नो कपाल सक्कली भएको बताएपछि हमालले ‘तानौ न त’ भन्छन् अनि शोभित जु,रुक्क उठेर हमाल भएतिर आफ्नो टा,उको झु,काउँछन् ।
“हमालले शोभितको टाउकोमा हात राखेर उन को कपाल तानेपछि ‘कपा,,ल आफ्नै रहेछ’ भन्दै उनी हाँस्छन् । आवा जविनाको भिडियो हेरेकै भरमा शोभितले राजेश हमाललाई ढोगेको भनेर गरि एको अनुमान यो भिडियोले गलत पु,ष्टि गर्छ ।
“तर, शोभितले फेसबुकमा पोस्ट गरेको भिडियो मा उनी राजेश हमालसँँग आमने-सामने भएर कुराकानी गर्दा निकै न,र्भस देखि एका छन् । हमालले सोधेको प्रश्नमा उनले अ,प्ठ्यारो र अ,स हज तरिकाले जवाफ फर्काएका छन् ।
“उक्त भेटमा उनले अब कहिल्यै ‘महानायक’ वि”वाद न-झिक्ने वाचा गर्नुका साथै पहिला नजानेर, नबुझेर वा आ,वेशमा भनेका कुरामा हमालसँग मा,फी मागेका थिए ।